Tour and activity information, photos and pricing for in Bangkok. Plan and book with Oway for cheap and affordable tours and activities. | Oway Bangkok - Pattaya4Days SIC Trip - Tour and Activity in Bangkok | Oway
Feature Tour	 Bangkok - Pattaya4Days SIC Trip
Bangkok - Pattaya4Days SIC Trip
1 x Adult(s) USD	425.00
Bagan - Pattaya4Days SIC Trip
ခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်သော အရာများ• အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်• ကြယ်သုံးပွင့်အဆင့်ရှိဟိုတယ်နှင့် နေ့စဉ်နံနက်စာ• သီးသန့်ကားခရီးစဉ်တလျှောက်• ဖော်ပြထားသော ၀င်ကြေးများ• ဖော်ပြထားသော မနက်၊ နေ့  ၊ ညစာ• ဒေသခံ ဧည့်လမ်းညွှန်• မြန်မာအုပ်စုခေါင်းဆောင်• Tip money
ခရီးစဉ်တွင်မပါဝင်သောဝန်ဆောင်မှုများ• ခရီးစဉ်တွင်မပါဝင်သောအခြားသောနေရာများအားသွားရောက်လိုခြင်းနှင့် အစားအသောက်များမှာယူသုံးဆောင်မှု• မိမိကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်များ၊ အချိုယမကာတယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် အ၀တ်လျှော်ခစသည်များ• ဟိုတယ်အတွင်းရှိ Minibar အသုံးပြုမှုနှင့် အခပေးရုပ်သံလိုင်းများအား ကြည့်ရှုမှု ၊ အခပေးအင်တာနက် သုံးစွဲမှုများ• ခရီးသွားနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အာမခံကြေး• Early check-in, check out are not guaranteed & subject to extra charge
သောကြာနေ့ (၂၄ ရက် ၊ မေလ ၊ ၂၀၁၉)	ရန်ကုန် - ဘန်ကောက် - ပတ္တရား နေ့လည်စာ ၊ ညစာ
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် မှ Oway အုပ်စုခေါင်းဆောင်နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းခရီးစဉ်ဖြင့် ဘန်ကောက်သို့ ထွက်ခွာပါမည်။ ထို့နောက် Thai Guide နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ပတ္တရားသို့ ခရီးဆက်ပါမည် ။ ကားမောင်းချိန် ၂နာရီခန့် ကြာမြင့်ပြီး ပတ္တရား သို့ ရောက်ရှိပါက ဟိုတယ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ထို့နောက် ရေချိုးအနားယူရန် အချိန်ပေးပြီးနောက် ညစာကို ဒေသခံ စားသောက်ဆိုင်တွင် သုံးဆောင်ပြီး ပတ္တရားတွင် နာမည်ကြီးသော ကပွဲ Kann Show သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုကြပါမည်။ ထို့နောက် တစ်ညတာ အေးချမ်းစွာ ပတ္တရား ဟိုတယ်တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
စနေနေ့ (၂၅ ရက် ၊ မေလ ၊ ၂၀၁၉)	ပတ္တရား - ဘန်ကောက် နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ ၊ ညစာ
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် သဲဖြူကျွန်းသို့ Speed Boat ဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ လေထီးစခန်းတွင် အချိ်န်ပေး ရပ်နားပြီး Coral Island သဲဖြူကျွန်းဇသို့ ရေကစားရန် ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ထို့နောက် နေ့လည်ဖက်တွင် Hotel သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပြီး Check out ပြုလုပ်ပါမည်။ ထိုမှ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီး Glass Sky Walk သို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် မှန်လျှောက်လှမ်းများ ပေါ်တွင် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါမည်။ ထို့နောက် Noogh Nooch Garden တွင် ပန်းဥယျာဉ်များ Photo Stand များ ထိုင်းရိုးရာကပွဲများ ကြည့်ရှုအပန်းဖြေကြပါမည်။ ထို့နောက် ဘန်ကောက်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာပြီး ညစာကို ဒေသခံ စားသောက်ဆိုင်တွင် သုံးဆောင်ကြပြီး ဟိုတယ် check in ၀င်ပါမည်။
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တန်ခိုးကြီး ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သော Emerald Buddha ခေါ် မြဘုရားအား သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ ဆက်လက်၍ အနောက်တိုင်းဗိသုကာ လက်ရာများ ပေါင်းစပ်ထားသော ထိုင်းဘုရင့် နန်းတော်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ပါမည်။ ထို့နောက် လွတ်လပ်စွာ ဈေးဝယ်ထွက်ရန် MBK သို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး ညစာကို ဒေသခံ စားသောက်ဆိုင်တွင် သုံးဆောင်ကြပြီး ဟိုတယ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
တနင်္လာနေ့ (၂၇ ရက် ၊ မေလ ၊ ၂၀၁၉)	ဘန်ကောက် - Dream World - ရန်ကုန် နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ (Buffet)
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် လွတ်လပ်စွာ ကစားနိုင်ရန် Dream World သို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး Snow Town တွင်လည်း နှင်းလျောစီးရင်း ပျော်ရွှင်စွာ ကစားကြပါမည်။ ထို့နောက် လေဆိပ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ရန်ကုန်သို့ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။